Obona matshini bekofu bangabizi kakhulu ngo-2022-Isikhokelo sokuthenga kunye nokubonelela
abenzi bekofu ezitshiphu
Oomatshini bekofu abagqwesileyo
Iintlobo zoomatshini bekofu
Oomatshini bekofu yeCapsule
Oomatshini bekofu abazenzekelayo
Oomatshini bekofu baseNtaliyane
abenzi bekofu ethontsizayo
abenzi bekofu yombane
iiplunger abenzi bekofu
Abenzi bekofu eCona
Abenzi bekofu eyakhelwe-ngaphakathi
Oomatshini bekofu kwimizi-mveliso
Iimpawu zomenzi wekofu
ikofu kunye nezixhobo
izixhobo zekofu ye-barista
ukucoca umenzi wekofu
Lungiselela i-cappuccino elungileyo
I-Cold Brew okanye ikofu ye-Iced
Sebenzisa umenzi wekofu waseTaliyane kakuhle
Yenza ikofu ngaphandle komenzi wekofu
yintoni ikofu yokuthenga
Izixhobo kunye nokunye
Ukuba uthanda ikofu (kunye nezinye i-infusions) kwaye ucinga khetha umenzi wekofu ofanelekileyo ehlangabezana neemfuno zakho uya kwazi ukuba akusoloko kulula ngenxa yoluhlu olukhulu lweentlobo ezikhoyo kwimarike. Kwaye ukuba sele kunzima ukukhetha uhlobo lomenzi wekhofi, kusenzima ukuhamba phakathi kwenani leemveliso ezahlukeneyo kunye neemodeli ezikhoyo.
Kubasebenzisi abangaqinisekanga, kule webhusayithi siza kuzama ukukufundisa yonke into oyifunayo ukuze ukwazi ukwenza isigqibo malunga nokuba loluphi uhlobo lomenzi wekofu olufunayo ngokuthanda kwakho, kwaye, zeziphi iimpawu kunye neemodeli ezicetyiswayo kwimeko nganye ukuba ufumane eyona mveliso ingcono kwimeko nganye. Ukongeza, oku kuya kukuthintela ekusebenziseni imali engaphezulu, uqinisekisa ukuba uhlawula ixabiso elifanelekileyo ngemveliso esemgangathweni.
Oomatshini bekofu abangcono kakhulu kwimarike
Ukuba awufuni ukuzidibanisa kakhulu okanye sele unombono othile, mhlawumbi kufuneka wazi ukuba ngabaphi oomatshini bekofu abangcono kakhulu ukukhetha eyakho. Njengesishwankathelo kwaye ngaphandle kokucalula ngohlobo, oku phezulu koomatshini bethu bekofu esibathandayo:
INCACAZO ESWETI PHEZULU
Bosch Tassimo Wonwabile...
Iindidi zoomatshini bekofu: yeyiphi eyona ifanelekileyo?
Akukho kuphela uhlobo olulodwa lomenzi wekhofi, ngaphandle koko ukhetho luya kuba lula kakhulu. Kukho ezintsha oomatshini bombane ezithe zavela zanikezela ngezona ziphumo zingcono kunye nentuthuzelo enkulu, ngaphandle kokuyisusa ngokupheleleyo indawo iimbiza zekofu zemveli. Ngesi sizathu, namhlanje kukho bobabini oomatshini bekofu abaqhelekileyo kwezona zihlanjululwayo, kunye nezo zangoku.
Bazi kakuhle iintlobo ezikhoyo koomatshini bekofu Kubalulekile ukwazi ukuba ungakhetha njani umenzi wekofu ongcono ngokweyona nto uyifunayo. Sikuxelela ngamagama ambalwa apha:
Las abenzi bekofu yombane zizo zonke ezo zithathe indawo yemithombo yobushushu yangaphandle kunye neenkqubo zokufudumeza zombane ukulungiselela ikofu okanye infusions. Olu hlobo lomenzi wekofu lu ngokukhawuleza kunye nokusebenza ngakumbi kumakhaya amaninzi. Ukongeza, abafuni ukucocwa okanye ukulungiswa njengento edinayo njengesiqhelo. Kweli qela ungafumana:
Oomatshini bekofu yeCapsule: zizo ezo zikhoyo ngoku, kuba kulula kakhulu ukuzisebenzisa kwaye zikhawuleza. Ukhetha ngokulula i-capsule yekofu okanye i-infusion ofuna ukuyilungiselela (ezinye zikuvumela ukuba ulungiselele iziselo ezishushu nezibandayo), zifake kumatshini, kwaye ngemizuzwana embalwa uya kuba neglasi okanye ikomityi yakho ilungile. Inkqubo yoxinzelelo lwayo iya kudlula amanzi ashushu kwi-capsule ukukhupha i-flavour kunye nephunga lomxholo kwaye iya kuyikhupha kwiglasi / indebe.
Oomatshini bekofu abazenzekelayo: aba matshini bavumela ukuba ukhethe iimbotyi zekhofi okanye ikhofi ephantsi (ukubonelela ngenkululeko enkulu ngokungaxhomeki kuhlobo lwe-capsule exhaswayo), kodwa ayifuni ingqwalasela eninzi njengangaphambili. Zihlala zimiswa ngexesha elifanelekileyo, ngaphandle kokuba uzimise ngokwakho, ngenxa yenkqubo ekwaziyo ukuba kungakanani ekufuneka kwenziwe. Ukongezelela, ngokuqhelekileyo baneminye imisebenzi eyongezelelweyo ngokumalunga nangaphambili.
Oomatshini be-espresso bezandla: ngokungafaniyo ne-super-automatic, abanalo i-grinder kunye nenkqubo yokucoca kunye nokucofa ikhofi kufuneka yenziwe ngesandla. Abanye bane-accessory eyakhelwe-ngaphakathi ukuze i-vaporize, oko kukuthi, ukuvumela ukuba wenze ngokuzenzekelayo loo magwebu obisi kwaye unike ikofu ukuba ukuthungwa okukhethekileyo kweengcali.
Abenzi bekofu eyakhelwe-ngaphakathi: zidla ngokuba ngoomatshini bekofu abazenzekela kakhulu, kuphela bakhiwe ngaphakathi ekhitshini njengezinye izixhobo zombane, kanye njengoko kunokwenziwa ngoomatshini bokuhlamba, oomatshini bokuhlamba izitya, ii-oveni, ii-microwaves, njl.
Idriphu okanye abenzi bekofu baseMelika: Ezi zizixhobo zekofu zombane eziqhelekileyo ezisebenzisa izihluzi ezilahlayo kunye nomthombo wokushisa wombane. Ungasebenzisa nayiphi na ikofu ephantsi oyithandayo. Umtshini uya kudlula amanzi ashushu kwikofu ephantsi kwaye ucofe ukuthontsiza umphumo kwi-jug edibeneyo. Kule meko abayiyo i-monodose. Ezinye ziquka i-thermos jug, ngoko baya kugcina ikofu ishushu iiyure ezimbalwa.
Abenzi bekofu yombane baseTaliyane: iyafana ngenkangeleko kunye nokusebenza koomatshini bekofu baseTaliyane okanye iimbiza zeMoka zemanuwali, kodwa zinikwe amandla ngumthombo wombane. Gcina ukhumbula ukuba oomatshini abaninzi bekofu base-Italiya abazixhasi izipheki zokungeniswa, kungoko kukho uguqulelo lwabo lombane.
iimbiza zekofu zemveli
Zizo ezo ziqhubeka zixhomekeke kumthombo wokushisa wangaphandle. Zayilwa kwiminyaka eyadlulayo kwaye zisekho nanamhlanje. Abathandi bekofu abaninzi bakhetha ukuqhubeka nokulungiselela ikofu yabo kolu hlobo lomatshini wekofu, belawula zonke iinkcukacha ukusuka ekuqaleni kwaye baqhube "isiko" lonke bade bafumane ikofu yabo egqibeleleyo. Oko kuthetha ukuba azikhawulezanga kwaye zifuna inkqubo yesandla, ngoko ke ayingawo wonke umntu. Phakathi kwabo, umntu unokwahlula phakathi:
Oomatshini bekofu baseNtaliyane: zizixhobo zekofu ezilula kakhulu eziquka itanki yamanzi kwindawo ephantsi. Le idiphozithi yile ibekwe kwipleyiti ukufudumeza kwaye wenze amanzi abile. Ngoko inyuka i-conduit kwaye idlula kwisihluzo apho ikofu ephantsi ifunyenwe khona. Ikhupha ivumba layo kwaye inyuke sele ihluziwe ukuya kwitanki kwindawo ephezulu.
iiplunger abenzi bekofu: Kwi-plunger ikofu maker kuvunyelwe ukwenza ikofu kunye naluphi na olunye ukufakelwa. Kufuneka ushushu amanzi ukuba abile kwi-microwave okanye kwi-saucepan, kwaye wongeze ngaphakathi kumenzi wekofu kunye nento ofuna ukuyifaka. Uvala isiciko kwaye utyhale iplunger ukuze amanzi anencasa adlule kwisihluzo sakho kwaye ngaloo ndlela ashiye imihlaba engezantsi.
Cona okanye vacuum abenzi ikofu: Luhlobo olungaqhelekanga kakhulu umenzi wekofu owaqanjwa kwiminyaka emininzi eyadlulayo. Ukusebenza kwayo, ngokuyinxenye, kuyafana nomgaqo wamaTaliyane. Lo menzi wekofu usebenzisa umthombo wobushushu wangaphandle, njengomlilo okanye isitshisi ukubilisa amanzi kwisitya sawo esisezantsi, esandisa igesi kwaye siyenze inyukele kwindawo ephezulu ngombhobho odibanisa zombini iindawo. Kulapho ikofu eza kugalelwa ikhoyo. Xa isusiwe ekushiseni, umoya kwindawo ephantsi inkontileka kwaye yenza umphumo we-vacuum, ukufunxa ikofu ukusuka kwindawo ephezulu ngokusebenzisa isihlunu. Isiphumo sokugqibela siya kuba yikhofi esele ilungele ukusela phantsi, ishiya iindawo eziphezulu.
Ekugqibeleni, i oomatshini ikofu yamashishini Baludidi olwahlukileyo. Ngokuqhelekileyo, banokudibaniswa kumbane, ekubeni basebenza kunye nenkqubo yokufudumala yombane. Kodwa zibiza kakhulu, oomatshini abakhulu abanobuchule obuphezulu. Oku kukuvumela ukuba wenze ikofu ngokukhawuleza kwaye wenze iikofu ezininzi ngexesha elinye kwezinye iimeko. Alungele amashishini okwamkela iindwendwe anje ngeekhefi, iibhari, iindawo zokutyela, iihotele, njl.
abenzi bekofu abathengiswa kakhulu
Ukuqhubeka noko sele kuthethiwe ukuza kuthi ga ngoku, ezi zezinye ze abenzi bekofu abangcono onokuthi uthenge kulo nyaka ngelona xabiso libalaseleyo lemali, iinkokeli ngokweendidi zazo ngokweentlobo zabenzi bekofu esele sizichazile:
UDe'Longhi wenze enye yezona matshini zibalaseleyo zekofu Dolce Gusto capsules ukuba ungayifumana Ngamandla e-1500w kunye nenkqubo yokufudumeza ngokukhawuleza ukuze ungalindi umzuzu omnye ukuze ikofu yakho ilungile xa uvakalelwa kukuba. Ngemivalo yayo ye-15 yoxinzelelo unokukhupha konke okulungileyo kwikofu okanye kwi-capsule ye-infusion ukuze unike i-flavour engcono kakhulu.
Ukongeza, idibanisa itanki yamanzi ye-0,8-litre, eya kukuvumela ukuba wenze iikofu ezininzi ngaphandle kokuphinda uzalise. Imele imisebenzi enomdla, njenge lungisa iziselo ezishushu okanye ezibandayo, ukugcinwa kulula kunangaphambili enkosi kuthi iyalumkisa xa ilixesha lokuhla.
Umenzi waseNtaliyane woomatshini bekhofi uye wanyamekela ukuyila kwalo matshini, kunye neenkcukacha kwinsimbi engenasici kunye nesimo esiza kuhobisa indawo obeka kuyo esi sixhobo. Ikwabandakanya flow-stop umsebenzi ukumisa i-jet ngokuzenzekelayo, i-self-adjusting drip tray kuzo zonke iintlobo zeekomityi kunye neeglasi, ukuvala ngokuzenzekelayo emva kwemizuzu emi-5 yokungasebenzi, njl.
Umvelisi owaziwayo u-Krups wenze enye yezona zixhobo zekofu ezingcono kakhulu nespresso capsules onokuthi ukufumane emarikeni ngexabiso eliphantsi. Ubuninzi benduduzo kulo matshini odibeneyo kunye nokukhanya okulula, kunye nesibambo se-ergonomic kunye nombala okhangayo.
Ineqhosha lokuyivula, kwaye nje Imizuzwana ye25 Kuya kulungeleka kunye namanzi kwiqondo lokushisa elifanelekileyo ukulungiselela ikofu ebalaseleyo. Zonke zondliwe ngetanki ye-0.7 ye-litre umthamo, kunye nokulungiswa kobungakanani bekomityi kunye namaqhosha ayo (i-Espresso ne-Lungo), ixesha elifutshane okanye elide.
Amandla ayo kunye noxinzelelo Ibha ye-19 Baqinisekisa ukuba unako ukukhupha yonke iphunga lebhontshisi yekhofi yomhlaba kwii-capsules, kunye neempawu ezilindelekileyo kwikomityi yekhofi. Uxinzelelo oluncinci lokumonela oomatshini bekofu abaqeqeshiweyo.
Ngapha koko, kuye inkqubo anti-drip, kunye nenkqubo yokuvala oluzenzekelayo ukuba uyayishiya ngaphandle kokuyisebenzisa ngaphezu kwe-9 min.
Ukuba ukhetha i Tassimo capsules, umenzi we-Bosch uphinde unikeze enye yezona zixhobo zekofu ze-capsule ezilungileyo kakhulu kule nkampani esetyenziswayo. I-1400w yamandla, itanki ye-litha ye-0.7, kunye ne-compact kunye ne-design ekhangayo ihambelana nalo matshini ukugalela.
Ngayo ungonwabela iincasa zokhetho lwe ngaphezu 40 iziselo shushu nayo yonke incasa yoqobo. Akukho zicwangciso zinzima, khetha nje i-capsule oyifunayo, cofa iqhosha kwaye ulinde ikomityi yakho okanye iglasi ukuba ilungile (ngenkxaso ehlengahlengiswayo yobukhulu obahlukeneyo).
Kwaye ukugcina i umenzi wekofu ococekileyo kunye nokuba iincasa azixubeki, emva kokusetyenziswa ngakunye umenzi wekofu unenkqubo yokucoca umphunga ocinezelekileyo ukuyishiya ilungele ukulungiselela esinye isiselo esahlukileyo kwangoko.
Olunye uphawu olukhulu lwaseYurophu yiPhilips. Ngeli xesha unomzekelo womenzi wekofu i-senso capsules ukuba uya kukuthanda Ifumaneka ngoyilo olutsha kunye nobuninzi bemibala ukukhetha eyona ifanelekileyo ngokokuthanda kwakho.
Ngumenzi wekofu owahlukileyo, kuba nangona idosi enye ikuvumela ukuba ulungiselele iikomityi ezimbini zekofu ngaxeshanye. Yonke into ngokukhawuleza kwaye kulula, ukukhetha ubunzulu bekofu ende, ethambileyo, emfutshane kunye neyomeleleyo oyifunayo nangaliphi na ixesha kwaye ulinde isiphumo esikhawulezileyo.
La Itekhnoloji yokunyusa ikofu iqinisekisa ukukhupha yonke incasa ye capsule nganye ngoxinzelelo lwayo, iqinisekisa incasa engcono. Ukongeza, itekhnoloji yeCrema Plus iqinisekisa ukuba umaleko we-crema ucolekile kwaye unokwakheka okungcono kunabanye oomatshini bekofu yombane. Kwaye ukuba awuyisebenzisi, ubuchwepheshe bayo bokugcina amandla buya kuyicima ngokuzenzekelayo kwimizuzu engama-30.
Oroley Yenye yeebrendi ezilungileyo onokuthi uzithenge ngolu hlobo abenzi bekofu baseItali. Abantu abaninzi bakhetha ukulungisa ikofu ngolu hlobo lomenzi wekofu yemveli kuba besithi bathanda incasa yayo ngcono. Bakwanjalo yomelele kwaye ingabizi.
Ngaba yenziwe nge-aluminiyam, kwaye ifanelekile kuzo zonke iintlobo zekhitshi, ngaphandle kokungeniswa. Itanki yayo yamanzi inomthamo weekomityi ezili-12, nangona kukho ubungakanani obahlukeneyo bokugubungela iimfuno ezahlukeneyo. Ikwabandakanya ivalve yokhuseleko ukuthintela iingozi.
Iklasi yokwenyani yokonwabela ikofu ngendlela yakudala, ukumamela i-gurgling kunye nokuphefumlela ivumba layo. Ayinakulahleka ekhayeni lakho kwaye ukongeza ekulungiseleleni ikofu emnandi, Oomatshini bekofu baseNtaliyane bongeza uchuku olwahlukileyo oko akuyi kuhoywa kwaye kuya kunika ubuntu obuninzi kwikhitshi lakho.
Ukuba ukhetha enye umenzi wekofu ozenzekelayo ozenzekelayo, enye yezona zinto zibalaseleyo uya kuzifumana sisiTaliyane De'Longhi Ecam Magnifica, kunye noxinzelelo lwe-bar ye-15, amandla e-1450w, i-tank yamanzi ye-litre ye-1.8 esuswayo, iphaneli ye-LCD ukujonga ulwazi, inkqubo ye-cappuccino, i-dispenser yekhofi ehlengahlengiswayo yobukhulu obuhlukeneyo, kunye nokucoca ngokuzenzekelayo.
Ngaphandle kwamathandabuzo, lo ngowona matshini wekofu wesiphelo esiphezulu. Isixa semisebenzi esiyizisayo sinomtsalane kwaye ukugqitywa kwekofu kumnandi nje. ikofu esandul' ukugaywa enkosi kwi grinder yayo oluzenzekelayo phezulu kunye nenqanaba eliphezulu xa ifika yenza ikofu yakho ibe yeyakho.
Lo menzi wekofu wasekhaya unikezela malunga iziphumo zobungcali ukuba uya kuyithanda ukuba ungumthandi ikofu elungileyo. Ukongeza, kukuvumela ukuba ulungiselele iikomityi ezimbini zekofu ngexesha elinye. Kwaye ngokungaxhomeki kwii-capsules, kukuvumela ukuba ukhethe ikofu oyithandayo kakhulu.
I-De'Longhi eqinile ikwabonelela ngenye imodeli entle kakhulu ukuba ujonge into elungileyo umenzi wekofu yengalo ekhaya. Ngalo menzi wekofu uya kufumana iikofu ezimnandi enkosi kumandla anikezelayo we-1350 W kunye noxinzelelo oluphezulu lokubulela kwimpompo yayo yemveli eyi-15 cm emxinwa.
Idibanisa inkqubo ye-Thermoblock ukufudumeza amanzi kwiqondo lobushushu elifanelekileyo kwimizuzwana engama-35 kuphela. Isebenza nayo nayiphi na ikofu ephantsi kunye neepod "Easy Serving Espresso", ukukunika inkululeko enkulu xa ukhetha imveliso. Kwakhona, enye yezona zinto zibalulekileyo zeyakho ingalo ene-360º ukujikeleza "capuccinatore" ukufumana amagwebu obisi angcono kunye ne-cappuccinos ngokungathi uyi-barista yobuchwephesha.
Ubhejo olukhuselekileyo kunye elinye ixabiso best imali yenzelwe bonke abo bantu banandipha inkqubo yokulungiselela ikofu.
UDe'longhi unikezela -...
Phakathi kwezona matshini zithengiswa kakhulu zekofu ezizenzekelayo yi Oster Prima Latte, kuba inexabiso elilungelelanisiweyo ngokufanelekileyo koko linikezelayo ngokwenene. inokulungiselela cappuccinos ezimnandi, lattes, espressos, kwakunye nobisi umphunga ukufumana igwebu elihle.
Ngumatshini we-espresso wasentsomini, ethandwayo websites ezininzi kunye nabathandi ikofu kuba incasa eyinika ngexabiso eliphantsi kakhulu kunabanye oomatshini ezibiza kakhulu.
Inetanki yamanzi Umthamo weelitha ezingama-1.5, kunye nenye itanki yobisi eyongezelelweyo engama-300 ml. Inokufudumala ngokukhawuleza ngenxa ye-1238 W yamandla ayo.
Own a Uxinzelelo lwe Ibha ye-19 ukukhupha ubuninzi bekofu, kwakhona ukunika ubuninzi be-creaminess kwisiphumo. Kwaye kulula kakhulu ukuyicoca, kwaye ikuvumela ukuba ususe itanki yobisi ukuyigcina efrijini.
Kukho inguqulelo yesibini yomatshini, i Oster Prima Latte II, ngamandla amakhulu kunye nomthamo, kwaye nangona i-purists isakhetha i-original, iseyi-bet enomdla.
Lo Umenzi wekofu yombane waseCecotec Ngomnye onomdla kakhulu ngaphakathi kolu hlobo. Umenzi odumileyo weerobhothi zasekhaya naye wenza oomatshini bekofu ngoyilo oluhle, olubambeneyo, kunye nokuphumeza iziphumo ezilungileyo kakhulu xa kuthelekiswa nabakhuphisana nabo ngokuthe ngqo.
Inamandla e-1350w ukufudumeza amanzi okufakelwa, i-Thermoblock ukuyenza ikhawuleze, Ibha ye-20 yoxinzelelo lokufumana elona khrimu ligqwesileyo kunye nelona vumba liphezulu njengoomatshini bekofu abaqeqeshiweyo, kubandakanya i-steamer ukwenza ubisi oluluqilima kwaye ufumane amagwebu alungileyo, ivumela amanzi ashushu ukuba akhutshiwe ukulungiselela ukufakwa, itanki yomthamo we-1.2-litre, kunye ne- inkqubo anti-drip.
IKofu yeCecotec Express...
Melitta Jonga iTherm Deluxe
Ukuba ungomnye wabo bakhetha Abenzi bekofu yaseMelika okanye idriphu, iMelitta yaseJamani yenye yezona zinto zilungileyo onokuzithenga. Ingumenzi wekhofi wokucoca umbane, onegunya le-1000w (iklasi esebenzayo A), umthamo we-1.25 ilitha, kwaye yenziwe ngensimbi engenasici.
Iikomityi zekofu ezinencasa nezinevumba ezinde okanye ezimfutshane ongakhetha kuzo, ezine-thermos enokugcina ikofu ishushu kangangeeyure ezi-2 ngenxa ye-isothermal yejagi yayo. Ikwabandakanya isiciko, isibambi sokucoca i-anti-drip, ukuhambelana nezihluzi ze-1 × 4, isibambo, inkqubo yokwehlisa, ukulungiswa kokuqina kwamanzi, kwaye i-dishwasher ikhuselekile.
I-Melitta Jonga iTherm Deluxe...
Ubungakanani beCona D-Genius
Yeyona nto yokwenyani Cona ikofu umenzi, okanye vacuum. Kukho ezinye ezininzi ezifanayo kwimarike ezama ukuyixelisa, kodwa le yiyo kuphela egcina uyilo loqobo lwalo menzi wekofu yemveli, kunye nokunyaniseka kwayo, kuba isaveliswa yinkampani yaseCona.
Yenziwe eYurophu, inezikhongozeli ezimbini ze iglasi ye-borosilicate ukumelana nokutshatyalaliswa kwe-thermal kunye nenkqubo yokwenyani eya kukhupha lonke ivumba kunye neempawu zekofu ngenxa yesiphumo sokufunxa i-vacuum esiyibonakalisayo.
Ukuba nenkampani eyenza ikofu yaseCona lishishini elinzulu, uhlobo olupheleleyo lwesimbo kunye nobuntu. Kungenxa yoko le nto sicebisa ukuba ubalekele ukulinganisa kwaye ujonge iCona yasekuqaleni. Ixabiso layo liphezulu, kodwa isitampu asinakulinganiswa.
I-CONA 'Ubungakanani be-D-Genius...
Ukuba ukhetha ukusebenzisa i iiplunger abenzi bekofu, i-Bodum yenye yezona zinto zingcono kwaye zingabizi kakhulu onokuzithenga. Lo menzi wekofu unayo isitya esomeleleyo seglasi ye-borosilicate, umthamo wokulungiselela iikomityi ezi-8 ngexesha, kunye ne-plunger ene-filter edibeneyo.
Fudumeza amanzi de abile, yongeza ikofu ephantsi okanye infusion ofuna ukuyilungiselela umenzi wekofu, yiyeke ifake kwaye ucinezele iplunger ukuze hluza yonke imihlaba kwaye ubashiye bevaleleke ngasemva. Ngale ndlela uya kufumana isiselo sakho ngoko nangoko.
Olu hlobo lomenzi wekofu luya kukhumbuza ngaphezu komnye wootatomkhulu bakho, kwaye kunjalo indlela ephantsi, elawulekayo, elula ukuyihambisa kwaye oko kusebenza ukwenza infusions yazo zonke iintlobo.
Bodum 1913-01 Ikofu...
ILelit ngomnye wabavelisi abadumileyo koomatshini bekofu abazenzekelayo kushishino umthengisi wehotele. Ngokulula ukucoca insimbi engenasici, i-coffee bean grinder edibeneyo, umthamo omkhulu we-3.5 litanki yamanzi, i-1200 W yamandla, kunye nenkqubo yoxinzelelo oluphezulu.
Inevalve eneendlela ezi-3 ukomisa umgubo wekofu, iqela leentloko ukulungiselela ikofu enye ngexesha, kunye neketile yobhedu. Iyahambelana neembotyi zekofu zombini, ikofu egayiweyo, kunye neepods zekofu. Ukongeza, ibandakanya inkqubo yokuphunga kunye nokuvelisa i-foam elungileyo.
Njengoko uphawu ngokwalo lubonisa, umenzi wekofu "kuphela kubathandi bekofu": yenziwe ngokupheleleyo ngentsimbi, ukugqiba kuyamangalisa kwaye imisebenzi yayo iphezulu kwabalimi bekofu abanzima kakhulu.
Indlela yokukhetha umenzi wekhofi: inyathelo ngesinyathelo isishwankathelo
Ukuba kubonakala kuwe ukuba izinto zinzima, siya kuzama ukwenza lula inkqubo ye ukhetha ukuba yeyiphi umenzi wekofu oza kuyithenga. Into yokuqala kufuneka uyigcine engqondweni yile nto uyifunayo ukuze ukwazi ukuba yintoni oyifunayo. Into ebonakala icacile, kodwa loo nto ayilula kangako ekusebenzeni. cinga ngoku khetha uhlobo lwentlawulo oyifunayo ukulungisa imbiza yakho yekofu yexesha elizayo:
Ikofu kuphela: Kuya kufuneka ukhethe phakathi kweNespresso, iSenseo, isiTaliyane, enokudityaniswa, ingalo, i-super-automatic, idriphu okanye iAmerican, iCona, kunye neecapsules zeshishini (ukuba yeyeshishini). Ngaphakathi koku, unokunciphisa amathuba ngokokuba ufuna intuthuzelo engaphezulu okanye encinci:
Ngokuzenzekelayo: Nespresso capsules, Senseo, integrable, ingalo, super-automatic.
ngezandla: idriphu okanye iMelika, iCona, okanye ishishini.
Ezinye izithambiso (iti, i-chamomile, i-lemon balm, i-valerian, ...): Kuya kufuneka ukhethe phakathi kweDolce-Gusto, iTassimo, okanye umenzi wekofu weplunger. Njengakwimeko yangaphambili, unganciphisa amathuba ngakumbi:
Ngokuzenzekelayo: ukusuka kwiDolce-Gusto okanye iTassimo capsules.
Nje ukuba ucacelwe malunga noluphi uhlobo lomatshini okanye umenzi wekofu oyifunayo ngokwento ofuna ukuyilungisa, unokubona lo mzobo ulandelayo ukumisela ukuba zeziphi ezi iiyantlukwano zohlobo ngalunye lomenzi wekofu, kwaye ke ugqibezele ukukhetha enye:
yee-capsules: ngokukhawuleza, kulula kwaye kusebenza.
Nespresso: umphumo uyikhofi enzima kakhulu, enomzimba omhle kakhulu kunye nephunga elimnandi, kunye nokuthungwa okufanelekileyo. Iicapsules zilinganiselwe ngakumbi xa kuthelekiswa neDolce-Gusto okanye iTassimo, ekubeni ufumana ikhofi kuphela, yeentlobo ezahlukeneyo, kodwa kuphela.
UDolce GustoUkubhanqa: ikofu ebukhali, ivumba elimnandi, igwebu elihle kunye nokuthungwa. Ngeentlobo ezininzi zee-capsules zekhofi zeentlobo ezahlukeneyo (i-espresso, i-spotted, i-cut, i-decaffeinated, ...), kunye ne-tea yobisi, i-cold tea, kunye nezinye iziselo ezishushu nezibandayo.
UTassimo: Nangona umgangatho ungekho phezulu njengezimbini ezidlulileyo, unika iziphumo ezifanayo. Ukongeza, ii-capsules onokuzifumana zihluke kakhulu, njengakwimeko yeDolce-Gusto. Ukusuka kwiikofu ezahlukahlukeneyo kakhulu ukuya kwi-infusions kunye nezinye iziselo zepati ezaziwayo. Ngaphezulu kweendidi ezingama-40 ezahlukeneyo, lolona khetho lubalaseleyo ukuba ujonga iindidi ngaphezulu kwayo yonke enye into.
Senseo: yenzeka njengeNespresso, ithintelwe kancinci ngokweendlela ezahlukeneyo. Ikofu kule meko umgangatho ufana neTassimo.
I-Superautomatic, ingalo okanye edibeneyo: ezi zintathu zineziphumo ezilinganayo. Iikofu ezifanayo nezo zifunyenwe kwi oomatshini bekofu abaziingcali, kunye nenzuzo yengalo ye-vaporizer ukudala i-foam ephezulu ongenakuyifumana kwii-capsules, okanye kwezinye izinto zombane okanye zendabuko.
omnye umbane: I-American okanye i-drip coffee, ngaphezu kokuba ingabi lula kwaye ikhawuleza njengangaphambili, umphumo wekhofi ucoceke kakhulu, okuvumela ukuba i-aromas kunye neencasa ezahlukeneyo zixatyiswe. Ngaphandle koku, abathandi bekofu elungileyo abazixabisi kangako. Endaweni yoko, zinokuba zilungele abo bafuna into ephantsi, kunye nenkululeko yokusebenzisa nayiphi na ikofu, kunye nabenza izixa ezikhulu zekofu ngaxeshanye kwaye bengasebenzisi enye.
Tradicionales: inkqubo ayikhululekanga njengakwixesha elidlulileyo. Kufuneka uqhube inkqubo inyathelo ngenyathelo ngesandla de ufumane isiphumo.
Italian: zikuvumela ukuba ulungiselele ikofu elungileyo kunye nevumba elibi kakhulu. Zikwashibhile kwaye azinzima ukuzisebenzisa, nangona inkqubo icotha. Nangona kunjalo, ikuvumela ukuba wenze ngaphezu kwekomityi enye ngexesha ngokuxhomekeke kubukhulu.
ikhowuni: ukuba ziyi-Cona yokwenyani, iziphumo zihle kakhulu. Ngokugalela ikofu kubushushu obuphantsi kunezinye (malunga ne-70ºC), oku kwenza ikofu igcine iimpawu zayo ze-organoleptic ngcono kunezinye iindidi.
plunger: Banokubonelela ngeziphumo ezifanayo nezo zangaphambili. Amandla abo aphezulu kukuba amaxabiso aphantsi kakhulu kwaye alungele abantu abadala abangaziyo indlela yokusebenzisa ezi zanamhlanje okanye abangafuni ukwenza nzima ubomi babo.
I-Industriales: kumashishini, ukufikelela kwiincasa zobungcali kunye nokuthungwa ngenxa yeempawu abazinikezelayo. Ziyabiza kakhulu kwaye zikhulu. Ezi ntlobo zoomatshini be-espresso ziyi-manual, nangona zikwakho ne-super-automatic.
Yeyiphi ikofu oza kuyithenga?
Ngokuxhomekeke kuhlobo lomenzi wekhofi oyisebenzisayo, uya kufuna ikofu enye okanye enye. Mhlawumbi nomenzi wakho wekofu uxhasa iintlobo ezininzi zekofu. Ngamnye kubo uneempawu zayo kunye namaqhinga. Ngaba uyazi ukuba zingaphi iindidi ze iifomsile zekofu zikhona? Yintoni imfihlelo yokukhetha eyona ikofu egayiweyo? kwaye ukuba uyathenga iimbotyi zekofu, indlela yokusila kakuhle?
Izixhobo zekofu: izinto ezibalulekileyo
Umhlaba wekofu mkhulu kwaye ukuba uyasithanda esi siselo awuyi kuyeka ukumangaliswa linani leenketho ezikhoyo jika amava ekofu abe yinto eyodwa. Kwabaninzi ide ibe sisithethe. Nangona kunjalo, kukho inani lezixhobo ezibonakala zibalulekile: iibrashi zobisi ukuphumeza ukugqwesa kwi-creaminess, iigrinder zekofu ukwenzela ukuthungwa okugqibeleleyo okanye thermoses ukugcina kunye nokuthutha ikofu yakho. Phuma.
1 Oomatshini bekofu abangcono kakhulu kwimarike
2 Iindidi zoomatshini bekofu: yeyiphi eyona ifanelekileyo?
2.1 abenzi bekofu yombane
2.2 iimbiza zekofu zemveli
2.3 Oomatshini bekofu kwimizi-mveliso
3 abenzi bekofu abathengiswa kakhulu
3.10 Melitta Jonga iTherm Deluxe
3.11 Ubungakanani beCona D-Genius
4 Indlela yokukhetha umenzi wekhofi: inyathelo ngesinyathelo isishwankathelo
5 Yeyiphi ikofu oza kuyithenga?
6 Izixhobo zekofu: izinto ezibalulekileyo
Oomatshini bekofu yeCona kunye noomatshini bekofu yokufunxa
Oomatshini bekofu yeBialetti
Oomatshini bekofu baseBosch
Abenzi bekofu yeBra
Oomatshini bekofu baseCecotec
DeLonghi Coffee Abenzi
Delta Coffee Abenzi
Oomatshini bekofu beDolce Gusto
Oomatshini bekofu be-Illy
Abenzi bekofu beJura
Krups oomatshini bekofu
Oomatshini bekofu yeLavazza
Oomatshini bekofu yeMelitta
Abenzi bekofu beMiniMoka
Oomatshini bekofu yeNespresso etshiphu
Oomatshini bekofu yeOrbegozo
Abenzi bekofu yeOroley
Abenzi bekofu yeOster
Oomatshini bekofu yePhilips
Oomatshini bekofu yeSaeco
Oomatshini bekofu yeSenseo
Oomatshini bekofu ye-Smeg
Abenzi bekofu yeSolac
Oomatshini bekofu beTassimo
Ufesa koomatshini bekofu
Iintlobo zee-capsules zekhofi
Oomatshini bekofu abancinci 2022 - Umgaqo-nkqubo wobumfihlo - Contacto